ချဉ်ဖတ် ~ လူဗိုလ်ဟူသည် ...
Author: lu bo | 9:29 PM | No မှတ်ချက် | ‎Kyaw Thu Ya‎ to စွယ်စုံကျမ်း
ကျောင်းသားလေးတွေပြေးနေကြ တဲ့ အပြေးပြိုင်ပွဲလေး တစ်ခု။ ဆရာ၊ ဆရာမတွေ၊ အတန်းဖော် ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေ ရဲ့ အားပေးမှုတွေ နဲ့ ကလေးတွေ ပြေးနေကြတယ်။ ပန်းဝင် ခါနီးပြီ။
ထိပ်ဆုံးမှာပြေးနေတာ နှစ်ယောက်ထဲ တစ်ယောက် က အတန်းထဲ မှာ နာမည်ကြီး စာ အတော်ဆုံး၊ ဆရာမတွေ အချစ်ဆုံး မောင်ထိန်ဝင်း။ သူ့ဘေးမှာ ကပ်ပြေးနေတာ ကတော့ ကျောင်း ချဉ်ဖတ်၊ ထပ်ရှင်းအောင်ပြောရရင် စာမတော်ဘူး၊ ဆရာမတွေ အမြင်ကပ်ကြတယ်။ ခိုင်းရင် လုပ်ချင်မှ လုပ်တတ် လို့လေ။ ဒါပေမယ့် သူငယ်ချင်းတွေ ကတော့ အရမ်းချစ်ကြတယ်။ သူ့နာမည် က မောင်ကြည်လင် ။ နာမည်နဲ့ လူနဲ့ က သိပ်မကိုက် အသား က ခပ်ညိုညို၊ မျက်နှာလေးထောင့် နဲ့ ထူးခြား တာက အမြဲပြုံးနေတတ်သူ။ သို့သော် ပြဿနာကောင်လေး။ နာမည်ပင် ပျောက်နေပြီ။ ချဉ်ဖတ်တဲ့ ။ ပရိသတ်ထဲ မှာ အသံ အထွက်ဆုံး က -
"ထိန်ဝင်းကွ ..... ပြေးကွ ..... မင်းနိုင်ရမယ်ကွ"
ကျောင်းသားလေး တစ်သိုက် ကတော့ - "ချဉ်ဖတ် ပြေးထားကွ ..... ဒီကောင့်ကို အနိုင်ယူပြလိုက် စမ်းကွ"
ထိုစဉ် မှာပင် မောင်ထိန်ဝင်းခြေခေါက်ပြီး တလိမ့်ခေါက်ကွေး ပစ်ကျ သွားကာ ဂျွမ်းတွေ ပင်လေးငါး ပတ်လောက် ထိုးသွားတယ် ထင်ရတယ်။ ပြိုင်ဘက် မရှိ တစ်ဦးတည်း ပန်းဝင်ဖို့ ချဉ်ဖတ် အခွင့်အရေး ရလိုက်ပါတယ်။
အားပေးနေတဲ့ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေ နဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမတွေထံ မှ "ဟာ"ဆို တဲ့ အသံကြီးကို အလွန်ပင် ကျယ်လောင်စွာ ကြားလိုက်ရပါတယ်။ သူတို့တွေ က ထိန်ဝင်း ကိုသာ နိုင်စေချင်စိတ်ကြီးစိုးနေချိန် မထင် မှတ် ပဲ အရှုံးနဲ့တွေ့ရမည် ကို အလွန်ပင်နှမြော ၍ ထွက်လာသော အသံ ဖြစ်လိမ့်မယ်။ "ဟင်"
ဒီအသံ က ပိုကျယ် သွားခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်သူမှ မထင်မှတ် ထားတဲ့ အပြုအမူ၊ မြင်ကွင်းတစ်ခု ကို တွေ့လိုက် ရ၍ဖြစ် ပါတယ်။ ပစ်လဲ ကျသွားသော မောင်ထိန်ဝင်း ကို ချဉ်ဖတ် က ဆွဲပွေ့ လိုက်လို့ပါပဲ။ အားလုံး စိတ်ထင် ချဉ်ဖတ် တော့ပျော်ပြီး ပန်းဝင် လိုက်ပြီ ထင်နေကြတာပါ။ ပန်းဝင် ဖို့ ကလည်း ကိုက် ၁၀၀ သာသာ ကျန်တော့ သည်ပေါ့။
မောင်ထိန်ဝင်း ကို ဆွဲပွေ့လာပြီး ပြိုင်ပွဲ အပြင်ကို ထွက်လာတာ ကျောင်း ရဲ့မကောင်း သတင်း နာမည်ကြီး ချဉ်ဖတ် ဖြစ်နေသည် ကိုက အားလုံး အတွက် အထူးအဆန်း ပမာ ဖြစ်နေကြပါတယ်။
"ဟိုကောင်တွေ လာကြလေကွာ၊ မြန်မြန် လာကွ ဒီကောင့် ကို ဆေးခန်းပို့ မှ ရလိမ့်မယ် ထင်တယ်"
ပရိသတ်ကြား မှ အခန်းဖော်တွေ၊ ချဉ်ဖတ် သူငယ်ချင်းတွေ ပြေးထွက် လာကြပြီး ညည်း ညူနေသော မောင်ထိန်ဝင်း ကို ဆေးခန်းပို့ရန် ၀ိုင်း၍သယ်ပိုးကာ ထွက်သွားကြတယ်။ ထိုကြားထဲ ပြေးလိုက် သွားတာ ကတော့ အလွန်ပင် စိုးရိမ်သော မျက်နှာနဲ့ အတန်းပိုင် ဆရာမ ဒေါ်မြင့်မြင့် ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းအလံ တိုင်အောက် က အုတ်ခုံလေး မှာ ထိုင်ကျန် ခဲ့တာကတော့ ချဉ်ဖတ်ပါပဲ ။ ဆေး ခန်းကို လိုက် မသွားခဲ့ပါဘူး။ မောနေသော် လည်း ခပ်အေးအေး ပုံစံနဲ့ အလံတိုင်ကို မှီပြီး ရေအိုးစင် ကခပ် လာ တဲ့ရေ ကို စိမ်ပြေ နပြေမော့သောက်နေပါတယ်။ "ချဉ်ဖတ် လာ ထိုင်လေကွာ "
"မင်း တို့ရော ဆေးခန်းလိုက် မသွားဘူးလား"
"ထားလိုက် စမ်းပါကွာ၊ မသေနိုင် ပါဘူးကွာ။ ဒါနဲ့ မင်း ဘာကြောင့် ပန်း မ၀င်လိုက်တာလဲ။ အခုတော့ မင်း တို့နောက် က ငပုကောင် ပထမ ရသွားတယ် ကွ။ မင်းပဲ ပထမဆု ရတဲ့ လွယ်အိတ်လေး လိုချင်တယ်ဆို"ချဉ်ဖတ် ဘာမှ မပြော ခပ်ပြုံးပြုံး ပဲ နေနေတယ်။ ထိုစဉ် သူတို့အနား ကို PT ဆရာ ဦးညိမ်း ရောက်လာပါ တယ်။ "ချဉ်ဖတ်"
အနားသို့ ဆရာရောက်လာ သဖြင့် အတင်းကုန်း ထပြီး မတ်တတ်ရပ် လိုက်ကြပါတယ်။ "မင်းလိုကောင်မျိုး မှာ ဒီလို စိတ်ဓာတ် ရှိတာ ငါရော၊ အားလုံးရော အတော် အံ့သြသွားတယ်ကွ။ မင်းကောင်တော့ ခြေဆစ်ခေါက်သွားလို့ မထနိုင်တော့ဘူး တဲ့။ ဒါနဲ့ မင်းက ပန်းဝင်ခါနီး ဘာလို့ ပန်းမ၀င်ပဲ ထိန်ဝင်းကို သွားပွေ့ ရတာလဲ "
"ဘာမှ မဟုတ်ပါဘူး ဆရာ၊ အဖေ က ပြောဖူး တယ် အနိုင် ဆိုတာ တကယ်တော့ အလွယ်ဆုံး ရယူနိုင်တယ် တဲ့။ အရှုံး ဆိုတာ ကိုသာ လူတွေ အလွယ် မရနိုင် တာတဲ့။ ကျွန်တော် က ဆုံးဖြတ်ပြီးသားပါ။ ပန်းဝင် ခါနီးရင် အလျော့ပေးပြီး ဒီကောင့် ကိုပဲ အနိုင်ပေးလိုက် မှာပါ ဆရာ။ ဒီကောင် က အတန်းထဲမှာ လည်း စာအတော် ဆုံး၊ စာစီစာကုံးပြိုင်ပွဲ မှာလည်း အမြဲတမ်း ပထမ၊ ဒီလို လူဆီ မှာ အရှုံး ဆိုတာကို လက်ခံနိုင်အား မရှိနိုင် ဘူး လို့ ထင်တယ် ဆရာ။
ဒါ့အပြင် ကျွန်တော်လိုကောင် နိုင်ရင်လည်း မကောင်းပြန်ဘူး။
ထိန်ဝင်းနိုင်ဖို့ ကို အားပေးနေ တဲ့၊ မျှော် လင့်နေတဲ့ သူတွေ ကို စိတ်ပျက် သွားစေမှာပေါ့။ အဖေ က ပြောတယ်။ လောက မှာ သူများ ကို ကျေနပ်စေ တာ၊ ပျော်ရွှင်စေတာ ကောင်းတဲ့ အလုပ်၊ လူတိုင်း မလုပ်နိုင်တဲ့ အလုပ် တဲ့။ တကယ်တော့ ဆရာရယ် .....
ကျွန်တော် က အမြဲ ရှုံးနေကျပါ။ သူများတွေ အမြင်မှာ ကျွန်တော် ရှုံးနေတာကို က သူတို့ အတွက် ကျေနပ် စရာဖြစ်နေ မှာပါ။ အဲ့ဒါကို က ကျွန်တော့် အတွက်တော့ အနိုင် ပါပဲ ဆရာ "
ဆရာရှေ့ မှ ခေါင်းလေး ငုံ့ကာ ထွက်သွားသော ချဉ်ဖတ် ခေါ် ကြည်လင် ရဲ့ နောက်ကျော ကို ဆရာလုပ်သူ မှာ ကြည့်နေရင်း (၈) တန်း အရွယ် ကလေး တစ်ယောက် ရဲ့ စကားတွေ ကို ဘယ်လို နားလည်ရမှန်း မသိ အံ့သြစွာ ကျန်ခဲ့ ပါတော့တယ်။ ဒီလို စကားတွေ ကို ဆရာဖြစ်သူ မကြားဖူးပါ။ ဒီလို ကလေးမျိုး မှာ ဒီလောက်မြင့်တဲ့ အတွေး အခေါ်ရှိနေတာ ပိုလို့ ပင် အံ့သြစရာ တစ်ခုပါ။ အခြား ဆရာတွေ ကို ဒီစကားတွေ ပြန်ပြောပြရင် ယုံကြပါ့မလား။
အတွေးတွေ များစွာဖြင့် ရပ်နေရင်း ...............
မောင်ထိန်ဝင်း ကျောင်းပြန်တက်တဲ့နေပေါ့။ အပြေးပြိုင်ပွဲ မှာ ပထမဆု ရသွားတဲ့ ငပုလို့ နာမည်ပြောင်ခေါ် တဲ့ ကျော်စိန် လည်း လွယ်အိတ် တကားကား နဲ့ ကျောင်းတက် လာတဲ့နေပေါ့။ အချိန်က အတန်းပိုင် ဆရာမဒေါ်မြင့်မြင့် အချိန် - "သားလေး သက်သာလား။
လမ်းကိုဖြေးဖြေးလျှောက်နော်။ အတက် အဆင်း သတိထား သိလား"
အချစ်တော် မောင်ထိန်ဝင်း ကို ကရုဏာ အပြည့်နဲ့ နိဒါန်းတွေခြွေနေတာပါ။
"ဆရာမ ၀င်ခွင့်ပြုပါ" အသံကြောင့် ကျောင်းသားတွေ အခန်းပေါက်ဝ ကို လှမ်းကြည့် မိကြသည်။ အပေါက်ဝ တွင် ရပ်၍ ၀င် ခွင့်တောင်းနေတာ ကတော့ ချဉ်ဖတ် ပါပဲ။
"ဟို အကောင် ဟင်..... ဒီနေ့ရော နောက်ကျနေပြန် ပီလား။ မင်း ကတော့ အတော်လွန် တာပဲ။ ဘာ စည်းကမ်း မှ လည်း မသိ၊ မလိုက်နာ။ နင့်လိုကောင် က ကျောင်းတက်နေ ဖို့ မကောင်းဘူး။ သွား ..... ၀င်၊ သွားထိုင်"
ကပို့ ကရို နဲ့ ချဉ်ဖတ် နောက်ဆုံး အတန်း ကို အပြေးတစ်ပိုင်း နဲ့ ၀င်ထိုင်လိုက်ပါတယ်။ ချွေးတွေရွှဲနေသော ချဉ်ဖတ် မှာ ပုဆိုးစကို ယူပြီး မျက်နှာ ကို သုတ်လိုက် ပါတယ်။ "မင်း ဘာဖြစ်လို့ နောက်ကျနေတာလဲ"
ထိုစဉ် အခန်းထဲ ကို ကျောင်းစောင့် ကိုပေါက်ကြီးပြေးဝင် လာပြီး ...
"ဆရာမ ... ဆရာမ
ဆရာမ အိမ် ခုန က မီးလန့် လိုတဲ့"
"ဟင် ..... ဟုတ်လား ...
ထိုင်ရာမှ ထလာပြီး အလွန်ပင် သောကရောက်သွားသော ပုံစံဖြစ်နေသော ဆရာမ ကို ကျောင်းသား ၊ကျောင်း သူတွေ ၀ိုင်းကြည့်နေကြပါတယ်။
"ဘာမှ မစိုးရိမ် ပါနဲ့တော့ ဆရာမ၊ မီးက ဘာမှ မလောင် သွားပါဘူး။ ကျောင်းသားလေး တစ်ယောက်တွေ့ပြီး အတင်းဝင် သတ်သွား လို့ မီးငြိမ်း သွားတယ်တဲ့။ ခုပဲ ဆရာမ တူလေး လာပြော သွားလို့ ကျွန်တော် လာပြော တာပါ" ကျောင်းစောင့် ကိုပေါက်ကြီး ပြန်ထွက် သွားပါတယ်။ ဆရာမလည်း အခန်းထဲပြန်ဝင် လာပြီး ခုမှသော ကအေး သွားသော မျက်နှာလေး နဲ့ သက်ပြင်းချလိုက်ပါတယ်။ "ကဲ ... ကဲ ... အိမ်စာတွေ လာတင်ကြ။ မတင်တဲ့ သူ မပြီးတဲ့သူ ကိုယ့် အသိစိတ်နဲ့ ကိုယ် ထွက်လာ ခဲ့နော် ။ ရှေ့မှာ လက် လာမြှောက် ထား"
ရှေ့ဆုံးမှ ထွက်လာသူ က ချဉ်ဖတ် ပါ။ ဆရာမ လည်း ချဉ်ဖတ် ကို မြင်လိုက်တဲ့ အခါ အိမ်စာ မလုပ်လာရ မလား လို့ ဒေါသ ထွက်သွားပါတယ်။ "ဟဲ့ ... ကြည်လင် !! နင် အိမ်စာ မလုပ်ခဲ့ပြန် ဘူးလား "
" ဒီ တစ်ခါတော့ လုပ်ခဲ့ ပါတယ် ဆရာမ။ ဒါပေမယ့် စာအုပ် ဘယ်မှာ ကျကျန် ခဲ့လည်း မသိဘူး။ မတွေ့တော့ လို့ လာ အပြစ်ခံ တာပါ"
"နင်ဟာလေ ... ငါ့တောင် လာ လိမ်နေတယ်ပေါ့။ လာခဲ့ ။ နင့်လိုကောင် ကို အရည် ဆုတ်ပစ်မှ ရမယ်" ခုံပေါ် မှ ကြိမ်လုံးကို လှမ်းယူပြီး ရိုက်ရန်ပြင်လိုက် ပါတယ်။ "ခဏ ... ဆရာမ ... ခဏ ၊ ရိုက်တာတော့ ရိုက်ပါ ဆရာမ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် မလိမ်ပါဘူး။ အိမ်စာ တကယ် လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
စာအုပ်လည်း တကယ် ပျောက်သွားတာပါ။ အဖေ ကပြောဖူးတယ်။
အပြစ်ဆိုတာ ရှိရင်တော့ ခံရမယ်။ အပြစ်သက်သာအောင်တော့ ဘယ်တော့မှ မလိမ်ရဘူးတဲ့။ အဲဒါ ယောက်ျားကောင်း
တို့ရဲ့အလုပ် မဟုတ်ဘူး တဲ့ ဆရာမ"
"ဒီကောင် ကတော့ ..... ကဲဟယ် ... ကဲဟယ် ... "
ကြိမ်ငါးချက် ကို အပြုံးမပျက် ပဲ ချဉ်ဖတ် ခံယူ လိုက်ပါတယ်။ အရိုက် ခံလိုက်ရတဲ့ အတွက် လက် မမြှောက် ရတော့ ပဲ ပြန်ဝင် ထိုင်ရပါတယ်။ ချဉ်ဖတ် ရဲ့ထူးခြားချက် မှာ အပြုံး မပျက်ခြင်းပဲ။
ညနေ ကျောင်းဆင်း ပါပြီ။ ဆရာမဒေါ်မြင့်မြင့် လည်း မနက်က ကြားထား တဲ့ ကိစ္စကြောင့် အိမ် ကို အမြန်ပြန် လာခဲ့ပါတယ်။ အိမ် ကို ရောက်ရောက်ခြင်း ထိုင်နေတဲ့ မိခင်ကြီး ကို ဘယ်လို က ဘယ်လိုဖြစ်တယ် ဆိုတာ မေးပါတော့တယ်။ ဆရာမတို့ အိမ်ဟာ လမ်းမဘေးမှာ ရှိနေတာပါ။ ခြံစည်းရိုးနဲ့ လည်း အိမ်ဟာ သိပ် မလှမ်းပါဘူး။ ဖြစ်ပုံ ကို မိခင်ကြီး ရှင်းပြသည် ကတော့ -
"သမီးရယ် အမေ က ဘုရားမီး ပူဇော်ပြီး နောက်ဖေး မှာ ဟင်းအိုး သွားကြည့်တာ။ အဲ့ဒါ ဘုရားမီး က ပြုတ် ကျပြီး အောက် က ဘုရားရှိခိုးရင် ထိုင်တဲ့ ပိတ်စ အခင်းပေါ်ကျပြီး မီး ထလောင်တာ ပါပဲ သမီးရယ်။
အဲ့ဒါ နဲ့ လမ်းကဖြတ်သွား တဲ့ ကျောင်းသားလေး တစ်ယောက် က လှမ်းတွေ့ လို့ အတင်း တက်လာပြီး သူ့ လွယ် အိတ်လေး နဲ့ မီးကို ရိုက်သတ် တာပေါ့။ မီးက မငြိမ်းတော့ အနီး က သောက်ရေအိုး ကို မပြီး ငြှိမ်း လိုက် တယ်လေ။ အမေလည်း ကြောက်ပြီး ကြောင်ကြည့်နေမိ တာပေါ့။ အဲ့ဒီ ကလေး က မီးလည်းငြိမ်းရော သားကျောင်းနောက် ကျနေ လို့ ခွင့်ပြုပါဦး ဆိုပြီး ဆင်းပြေးသွား ပါလေရော။ သူသာ မလာခဲ့ရင် အခု အိမ်တောင် ကျန်မယ် မထင်တော့ဘူး။ ဒါနဲ့ ဘုရားစင် နားက ဘီဒိုအောက် က သူ့စာအုပ်လေးတောင် လွင့်ကျ ကျန်ခဲ့သေးတယ် သမီးရဲ့ "
အမေဖြစ်သူ က ရှေ့စားပွဲပေါ်မှ ခပ်နွမ်းနွမ်း စာအုပ်လေး ကို ယူ၍ သမီး ဆရာမ ကို လှမ်းပေးလိုက် ပါတယ်။ ဆရာမလည်း လှမ်းယူပြီး အဖုံးပေါ်မှ နာမည် ကို ကြည့်လိုက်မိသော အခါ ရင်ထဲမှာ မီးတွေတောက်လောင် သွား သလားတောင် ထင်မိလိုက်ပါတယ်။
စာအုပ် အဖုံးပေါ်ရေးထား တာက မောင်ကြည်လင်
ဆရာမလည်း စာအုပ် ကို အတင်း ကာရော လှန်ကြည့်မိ လိုက်ပါတယ်။ မျက်ရည်တွေ လိမ့်ကျလာပါရော လား။ နောက်ဆုံး စာမျက်နှာ မှာ သူမ အိမ်စာ အဖြစ်ပေးလိုက်သော Essay အား သေသပ်စွာရေးထား သည် ကို တွေ့လိုက် ရပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ပြကွက် လို မျက်စိထဲ မှာ ပြန်လည်မြင်လာမိ ပါတယ်။ သူ အမှန်တွေပြောခဲ့သော်လည်း မယုံခဲ့ မိ ဘူး။ ဒေါသကြောင့် အားပြင်းပြင်း နဲ့ ရိုက်ခဲ့ မိတဲ့ ကြိမ်ဒဏ် ငါးချက် ကို တွေးမိပြီး မျက်ရည်တွေ ပိုကျလာ မိတယ်။ ................
သူ့ အခန်းထဲရောက်လာ တဲ့ ကာလ တစ်ခုလုံး တစ်ခါ မှ မျက်နှာသာ မပေး မိဖူးသော ကျောင်းသားလေး၊ စကားကြီး၊ စကားကျယ်တွေ ကို အမြဲပြောတတ် လို့ အမြင်ကပ် မိသော ကျောင်းသားလေး၊ အမြဲပြုံးနေတာကို ရိသလို လုပ်နေတယ်၊ ပြောင်စပ်စပ် လုပ်နေတယ် ထင်မိပြီး မျက်မုန်း ကျိုးခဲ့မိသော ကျောင်းသားလေး။ တကယ်တော့ .....
တကယ့် လူတော်လေး ပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ပတ် က အပြေးပြိုင်ပွဲ မှာ ပထမဆု အလွယ်လေး ရယူနိုင်သော်လည်း ပန်းမ၀င် ပဲ သူငယ်ချင်း ကို ပြေးကူ ခဲ့တယ်။ ခုလဲ ကျောင်းမှာပြောပြရင် ရရဲ့ သားနဲ့ နေရာ မယူဘူး။ နာမည်ကောင်း မယူခဲ့ဘူး။ ကျောင်း အလုပ်တွေ ခိုင်းသမျှလည်း တစ်ခါမှ မငြိုငြင် ခဲ့ဖူးဘူး။ .
နောက်တစ်ရက် မနက်ခင်း ...
ကျောင်းခေါင်းလောင်းသံကြောင့် ကျောင်းသားတွေ အတန်းတွေထဲကို ၀င်ပြီး နေရာ ယူကြပါတယ်။ ဆရာမဒေါ်မြင့်မြင့် ဒီနေ့ကျောင်းကိုခပ်စောစော ရောက်လာပြီး အခန်းထဲ ကို လည်း ခပ်စောစော လာခဲ့မိ တယ်။ စိတ်စောနေ မိတယ်။ ကျောင်းသားတစ်ယောက် ကို အလွန်တွေ့ချင်နေမိပြီး ကျောင်းသားတွေ ကို ခဏခဏ လှမ်းကြည့်နေမိတယ်။ သူရှာနေတဲ့ချဉ်ဖတ် ကျောင်းကို ရောက် မလာသေးပါ။ ကျောင်းတက်ခေါင်းလောင်း ထိုးပြီး ၍ နိုင်ငံတော် သီချင်းဆို၊ ဘုရား ရှိခိုးပြီးသည် အထိ ကြည်လင် (ချဉ်ဖက်) ရောက် မလာသေးပါဘူး။ စာသင်ဖို့ပင် စတင်နိုင် ပြီ ဖြစ်သော်လည်း ဆရာမ တစ်ယောက် ကြည်လင် ကို မျှော်နေမိ ၍ စာမသင်ဖြစ်သေးပါ။
ဖိနပ်သံကြားလိုက် ရပါတယ်။ ပြေးလာနေတဲ့ အသံ တစ်ခု။ "ဆရာမ ... ၀င်ခွင့်ပြုပါ"
အခန်းဝ မှ ၀င်ခွင့်တောင်းသံကြောင့် လှမ်းကြည့် မိလိုက်တဲ့ အခါ - "ဟင်"
ဆရာမ ထိုင်နေရာမှ အတင်း ထပြေး သွားမိသည်။ ကျောင်းသားတွေ လည်း "ဟာ" ခနဲဖြစ်၍ မတ်တတ်တွေ ထရပ် ကုန်ကြတယ်။ အခန်းဝ တွင် ခေါင်းမှာ ပတ်တီး အဖွေးသားနှင့် ပြုံးနေသော ...
ဒါမှ မဟုတ် အများ အခေါ် ချဉ်ဖတ် ကို တွေ့လိုက် ရ၍ဖြစ်သည်။
ဘာဖြစ် လာတာလဲဟင်။ ခေါင်းမှာလည်း ပတ်တီးကြီး နဲ့ ပါလား"
ဆရာမ ရဲ့ ကရုဏာ သက်နေတဲ့မြင်ကွင်း ကို တွေ့သော်လည်း မအံ့သြ ပဲ ခပ်ပြုံးပြုံး ပဲ နေနေပါတယ်။
"ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး ဆရာမ။ ခေါင်းနည်းနည်းပေါက်သွား တာပါ။ မနက် က အစောကြီး အမေ့ ကို ဈေးထကူပြီး ဆိုင်ဖွင့်ပေးနေတာ ဘယ်က လာတဲ့ ခဲလည်း မသိပါဘူး ဆရာမရယ် ၊ အဲ့ဒါ လာမှန်ပြီး ခေါင်းပေါက် သွား လို့ ပါ"
"သားရယ် ... ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ။ မင်းလို စိတ်ကောင်းရှိတဲ့ သူတောင် ခဲနဲ့ ချောင်းပစ်တဲ့သူ ရှိတယ် တဲ့လား"
ထိန်ဝင်းခေါ်သံကြောင့် ကျောင်းသားတွေ ရဲ့ မျက်လုံး အကြည့်တွေ သူ့ဆီ ရောက်သွားကြပါတယ်။ ထိန်ဝင်းမှာ မျက်နှာငယ်လေး နဲ့ ဖြစ်နေပါတယ်။ "ဆရာမ.....
ချဉ်ဖတ် ကိုလေးခွ နဲ့ ချောင်းပစ် တာ သားပါ"
အားလုံး အလွန်ပင် အံ့သြ မင်သက်သွားကြပါတယ်။
ထို အခါ ချဉ်ဖတ် က -
"သူငယ်ချင်း ထားလိုက် ပါကွာ။ မင်း မပြောပြလဲ ငါသိပြီးသားတွေပါ။ ထားလိုက် စမ်းပါ။ မေ့သာ ထားလိုက် စမ်းပါ။ ငါ ဘယ်သူ့မှ အပြစ်မတင်ပါဘူး ကွာ။ ငါ့မှာ ခံသင့်တဲ့ အကြောင်းကိစ္စရှိလို့သာ ခံရတာပါကွာ။ မင်းနဲ့ ဘာမှ မဆိုင်ပါဘူး။
ထိသွားတာလည်း နည်းနည်း ပါကွာ။ ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး။ မင်း ဘာမှ ဆက်ပြော မနေနဲ့တော့။ ထိုင်ပါကွာ "
အားလုံး ပိုလို့ အံ့သြသွားကြ ပါတယ်။ ခပ်ပြုံးပြုံး နဲ့ နောက်ဆုံးတန်း ကို လှမ်းဝင် သွားသော လူထူးဆန်း ချဉ်ဖတ် ကို ၀ိုင်းကြည့်နေမိကြတယ်။
ကိုယ့်ကိုခေါင်းပေါက်အောင် လေးခွ နဲ့ချောင်းပစ် ခံရတာတောင် ခပ်အေးအေး ပုံစံ နဲ့၊ အပြစ် လုပ်သူ ကိုတောင် အပြစ် မမြင်ပါလား။ "ထိန်ဝင်း"
ဆရာမ ရဲ့ ဒေါသသံ စွက်ဖက်နေသောခေါ်သံကြောင့် ထိန်ဝင်း လန့်သွားကာ ထိုင်ရာ မှ ထလိုက်ပါတယ်။ "မင်းက ဘာဖြစ်လို့ မောင်ကြည်လင် ကို လေးခွ နဲ့ ချောင်းပစ် ရတာလဲ။ မင်းကွာ ..... မတော် မျက်လုံး မှန် သွားရင် ဘယ့်နှယ်လုပ် မလဲ။ ဟိုက ရဲသွားတိုင်ရင် လည်း နင် အဖမ်းခံရ မှာ သိရဲ့လား "
သား မှားသွားပါတယ်။ ပြေးပွဲနေ့ က သူဝင် တိုက်လိုက် လို့ လဲကျသွားတယ် ထင်ပြီး လေးခွ နဲ့ချောင်း ပစ်မိ တာပါ ဆရာမ" "သူသာ အကျင့် မကောင်းရင် နင်လဲ သွားတော့ ပထမ ရအောင် ပန်းဝင် ယူမှာပေါ့။ ခုတော့ သူ့ကြောင့် နင် ဆေးခန်း ကို မြန်မြန်ရောက် ရတာလေ" "ဆရာမ ..... သားကို စကားပြောခွင့် နည်းနည်းလောက် ပေးပါလား"
နောက်တန်း မှ ချဉ်ဖတ် ထ၍ ပြောလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
"သူ့ကို အပြစ်မတင်ပါ နဲ့တော့ ဆရာမ။ တကယ် က သား အပြစ်တွေပါ။ ကိုယ့်ကို အမြင် မကြည်ဖြစ်နေတဲ့ သူကို အမြင်ကြည်အောင် ပြောတာ
နဲ့ မရနိုင် ဘူးတဲ့။ အချိန်အခါ နဲ့ အလုပ် ကပဲ ဖြေရှင်းပေးနိုင်တယ် တဲ့။ ဒါကြောင့် ဘာမှ မရှင်းပြမိတာ သား အပြစ်တွေပါ။ ပြီးတော့ ကိစ္စတစ်ခု ကို ပြီးသွားတဲ့ အခါ ပြီးတဲ့ အပေါ်မှာ မျက်နှာသာ ၀င်မယူရ ဘူးတဲ့။ ကိုယ့်ကောင်းကြောင်း ကိုယ်တိုင် ၀င်ပြောပြီး
မျက်နှာသာ ရအောင် ဘယ်တော့ မှ မလုပ်မိစေနဲ့တဲ့။ ဒါကြောင့်
ကိစ္စတွေ အားလုံး ထားလိုက်ပါ ဆရာမ။ သား ..... အားလုံး ကို ခွင့်လွှတ် သလို အားလုံးကို လည်း နားလည်ပေးနိုင် ပါတယ် " ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Credit. ; Original Uploader